कहिले हुदै छ यो सिजन को इएल क्लासिको(El Clásico)! आउनुहोस जानौ कसको सम्भावना कति !! - Experience Best News from Nepal
कहिले हुदै छ यो सिजन को इएल क्लासिको(El Clásico)! आउनुहोस जानौ कसको सम्भावना कति !!
प्रकाशित मिति : शुक्रबार, भदौ २२, २०७५
यो सिजनको पहिलो इएल क्लासिकोको मिति तय भएको छ । लिग च्याम्पियन बार्सिलोना र रियल मड्रिड अक्टोबर २८ मा भिड्ने छन् । यो इएल क्लासिकोमा क्रिष्टियानो रोनाल्डो भर्सेस लिओनल मेस्सी हुने छैनन् । यो सिजनको सुरुवातमै रोनाल्डो युभेन्टस गएका छन् ।
रियल मद्रिडका निम्ति क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाइ छोडेर अन्य खेलाडी बेल, बेन्जिमा, लुका मद्रिचको खेल हेर्न पाइनेछ। बार्सिलोना भने यस सिजनको ला लिगा जित्ने होडमा रहको छ। पुरानै खेलाडी र खेलको साथ उत्रिएको बार्सिलोना स्पेनिस् लिगको दाबेदार बन्ने पक्का देखिएको छ। बार्सिलोनाको खेलमा बाधा बनेको रियलमा रोनाद्लो न हुदा निकैका निम्ति इएल क्लासिको सहज हुने देखिन्छ।
रियल र बार्सिलोनाका दुवै कोचले रोनाल्डो न हुदा इएल क्लासिको इएल क्लासिको न रहेको पनि दाबी गर्दछन। मेस्सीले भने आफ्नो क्लब बार्सिलोना न छोड्ने ढिपी देखाएका छन। च्याम्पियन लिगको दाबेदारीको बन्ने छन् भन्ने एकिन गर्न सकिने आवस्था छैन।El Clásico
यही साता दुबै क्लबको च्याम्पियन्स लिगको समूह चरणको खेल पनि छ । रियल मड्रिडले भिक्टोरिया प्लेजान र बार्सिलोनाले इन्टरमिलानसँग खेल्नेछ ।
ला लिगामा लिओनल मेस्सीको हर्ष र दुखका १५ बर्ष !! बार्सिलोनाका निम्ति ७०० खेलमा मेस्सिका यस्ता कार्य सम्पन्न!!
एल क्लासिकोः बार्सा र रियल भिड्दै
बार्सिलोनाका डिफेन्डर “जिराड पिके” क्लबका निम्ति अभिसाप बन्दै !! यसरी भयानक बन्यो उनको यो हप्ता!!
मेस्सी रोनाल्डो बिना यस्तो देखिन्छ इएल क्लास्सिको ! आजको सम्भावित -११ यस्तो !!
एसिएल चोटका कारण बार्सिलोनाका राफिन्हा ६ महिना खेल नखेल्ने !
el clasicoLa Liga